WARBIXIN: Man United Oo Isku Shaandhayn Weyn Ku Samayn Doonta Daafaceeda & Xiddigaha Seeftu Dul Saarantahay – Kooxda.com
Home 2018 February Ingiriiska, Wararka Maanta, Warbixinada Ugu Xiisaha Badan, Warbixino WARBIXIN: Man United Oo Isku Shaandhayn Weyn Ku Samayn Doonta Daafaceeda & Xiddigaha Seeftu Dul Saarantahay
WARBIXIN: Man United Oo Isku Shaandhayn Weyn Ku Samayn Doonta Daafaceeda & Xiddigaha Seeftu Dul Saarantahay
Tababaraha Kooxda Man United ee Jose Mourinho ayaa Qorshaynaya isku shaandhayn weyn oo daafaca kooxda Man United ah marka la gaaro xagaaga xilli kooxda laga diri doono xiddigaha haatan jooga si uu tababaruhu xagaaga u keen sado xiddig oo ku aamini karo daafaciisa xilli ciyaareedka dambe.
Tababaraha Man United ee Jose Mourinh ayaa doonaya in uu keeno wajiyo cusub xilli xiddigaha reer England ee Chris Smalling & Phil Jones ay khatar weyn ku jiraa.
Mourinho ayaa la fahamsan yahay in uu si aad ah uga xun yahay qaab ciyaareedka daafacyadiisa reer England xitaa ka hor kulankii ay Axadii guuldarada 1/0 ahayd kala kulantay United Newcastle taas oo ku soo dhawaysay kooxaha Liverpool,Tottenham iyo Chelsea xilli uu dib u furmay tartanka loogu jiro kaalinta 2-aad.
Guuldardii ka soo gaartay garoonka St James’ Park ayaa muujiyay dal-dalooladooda daafaca dambe inkasta oo uu ay kooxda Jose Mourinho tahay kooxda ugu difaacyada fiican Premier league iyaga oo kaliya hal gool ka badan goolasha laga dhaliyay kooxda Man city.
Mourinho ayaa arkay kooxaha Liverpool iyo Man city oo 75 milyan iyyo 57 milyan ku kharash gareeyay daafacyada Virgil van Djik & Aymeric Laporte bishii hore waxana uu maamulka kooxdiisa u sheegay in ay bilaabaan in ay lacag fiican ku kharash gareeyaan daafacyada sidoo kale.
Red Devils ayaa lala xiriirinayaa xiddiga 50 milyan lagu qiimeeyo ee daafaca uga ciyaara xulka England iyo kooxda Leicester city ee Harry Maguire halka sidoo kale ka faa,iidaysan karaan xaalka xun ee Real Madrid kana soo afduuban karaan daafaca reer France ee Raphael Varane.
Tababaraha Old Trafford ee Mourinho ayaa waayay daafaciisa ugu fiican ee Eric Baillu kaas oo 3-dii bilood ee ugu damabaysay ku seegay dhaawac Kuraanta ah.
Bailly ayaa garoomada ku soo laaban doono dhamaadka bishan xilli sidoo kale xiddigaha Marcos Rojo & Victor Lindelof ay ku dhaw yihiin in ay ka qayb qaataan kulanka FA Cup-ka ee Huddersfield iyada oo la nasin doono xiddigaha Smalling & Jones.